G654 gbara ọchịchịrị isi awọ granite maka taịlị ala n'èzí
Aha ngwaahịa G654 gbara ọchịchịrị isi awọ granite maka taịlị ala n'èzí
Agba Agba ntụ ntụ
Emecha Nchacha, honed, ire ọkụ, igwe sawn, ire ọkụ+ brushed, ochie, ọkpọkọ elu, chiseled, aja gbawara agbawa, wdg.
Ụdị nkume Taịlị, Bee-to-size
Nha ihe mgbochi 300x600mm, 600x600mm,30x90mm, wdg.
Nkwakọ ngwaahịa Igbe osisi siri ike nke nwere oke osimiri
Ogo 1) QC na-eso site na ngọngọ ịkpụ na mbukota, lelee otu otu.
Ahịa ebumnuche Westen Europe, Eastern Europe, USA, North America, South America, Caribbean ebe, Australia, Eastern Asia, Middle East, South-East Asia, wdg
G654 granite bụ granite isi awọ gbara ọchịchịrị na China.Ọ na-akpọkwa unyi gbara ọchịchịrị granite, padang ọchịchịrị, sesame granite ojii, China nero impala granite, seasame ojii granite, Changtai G654 granite.Anyị na-ebunye ezigbo ihe G654 granite site na mgbawa nke anyị wee bee na ụlọ ọrụ nke anyị na ọnụahịa asọmpi.Nkume a nwere ike ịdị na-emecha: na-egbu maramara, ọkụ, honed, ájá gbawara agbawa, ohia hammered, wdg.
G654 granite bụ nke a na-ejikarị arụ ọrụ nrụpụta.Ọ nwere ọgwụgwọ dị iche iche, dị ka g654 slabs, g654 countertops, g654 kerbstone, g654 paving, g654 nzọụkwụ na windowsill.A na-eji ọkụ padang gbara ọchịchịrị G654 granite maka taịlị dị n'èzí eme ihe n'èzí n'ala ubi na-adịghị amị amị.Tumbled G654 gray granite n'èzí paver cube na-ewu ewu nke ukwuu.
* Dị ka ọ na-adịkarị, achọrọ ịkwụ ụgwọ 30% tupu oge eruo, yana nke ọzọ ruru mgbe nnata akwụkwọ.
Enwere ike ịnye ihe nlele marble na-erughị 200X200mm n'efu maka nnwale dị mma.
Onye ahịa na-ahụ maka ego nke mbupu sample.
MOQ anyị na-abụkarị 50 square mita.Enwere ike ịnakwere nkume okomoko n'okpuru 50 square mita.
Biko kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa mmelite kpọmkwem.
Nke gara aga: Chinese G603 granite isi awọ maka taịlị n'èzí
Osote: Juparana colombo granite isi awọ maka taịlị ala dị n'èzí
Oghere nkume aspen na-acha ọcha granite counter...
Giallo california pink granite ọhụrụ ọkụ maka e ...
Natural ledge stacked slate omenala nkume maka e...
Aja elu alụlụ ajari odo konkiri nkume f ...
Brazil akpụkpọ anụ versace matrix ojii granite f...
Ọnụ ahịa n'ogbe negro angola ojii granite maka ...
Granite odo odo, Gray Gray dị ọkụ, Black Granite, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Granite, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ,